पर्यटक समेत हेर्न आउथे “”३९ पत्नी र २ सय सन्तान भएका यी पुरुष रहेनन् ।:: Mero Desh
Published on: ३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०८:४८
काठमाण्डौं ।पर्यटकहरु पनि उनको परिवार हेर्नकै लागि आउथे।३९ पत्नी र २ सय सन्तान भएका यी पुरुष रहेनन्।पर्यटकहरु हेर्नकै लागि आउथे।।एजेन्सी, ३१ जेठ । यी हुन् जिओना । यीनको ३९ पत्नी र २ सय जति सन्तान सन्तान छन् । जिओनाको ७६ वर्षको उमेरमा आइतबार नि”धन भएको छ ।
“मधुमेहका वि’रामी उनको सोही रोग’का कारण निधन भएको जनाइएको छ । भारतको मिजोरामको अइजाल स्थित अस्पतालमा जिओनाको निधन भएको हो । उनको चुआन थार तिआननुम गाउँमा बसोबास थियो जहाँ उनका ३९ पत्नीसहित सन्तान दरसन्तान एउटै घरमा अझै बस्दै छन् ।
उनले पहिलो पत्नीसँग १५ वर्षको उमेरमा सन् १९५९ मा विवाह गरेका थिए । २४ वर्षको उमेरमा दोस्रो विवाह गरे । पछिल्लो विवाह उनले २५ वर्षीया युवतीसँग सन् २००४ मा विवाह गरेका थिए ।कतिपय छोरीहरु विवाह गरेर गएका छन् ।
उनको चार तल्ले विशाल घरमा अझैपनि १६२ जना बस्दै आएका छन् । उनको परिवारलाई हेर्नकै लागि गाउँमा पर्यटक आउने गरेका छन् । यो खबर प्रति तपाईको कुनै जिज्ञाशाह’रु भए र सल्लाह सुझाब भए प्रतिक्रिया दिनु होला।
यो पनि कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य मिनासिंह रखालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जीवन रक्षाको माग गरेकी छन् । प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको सातौँ बैठकमा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य रखालले प्रधानमन्त्री ओलीको जीवन रक्षा हुनु पर्ने धारणा राखेकी हुन् ।
“मान्छे मार्छु भन्ने स”र्वसाधारणलाई ज्यान मार्ने कसुरमा मुद्दा चल्छ भने प्रदेशसभा सदस्यको हकमा के कानून छ र ?” प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, “त्यसैले म भन्न चाहन्छु, सांसद ले रोष्टमबाट मान्छे मार्ने अ’भिव्यक्ति दिएपछि उनलाई कार वाही हुन्छ कि हुँदैन ?
त्यसैले यस्ता हिंस्रक अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर मात्र हुँदैन ।” उनले प्रधानमन्त्री ओलीको जीवन रक्षाका लागि पनि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने सांसदलाई हिरासतमा राखी कारवाही माग गरे ।रासस
‘म रहुँ या नरहुँ तिमि संधै ममा रहन्छौ’ यस्तो पोष्ट लेखेका प्रेमीले ‘भ्यालेन्टाइन डे’ को दिनमा प्रेमीकाको अगाडी प्राण त्यागे
५० पटक अन्तर्वार्तामा फेल भएकी युवतिलाइ गुगलले दियो डेढ करोडको जागिर !
‘घर मर्मत गर्न आएका यि यु’वाले बु‘हारी भगाईदिए पछि..
किम जोङको जन्म दिनमा फूल नफुलेपछि मालीलाई गरे का’रबा’ही
४९ बर्षिय नेताले १९ बर्षिय युवती सँग विवाह गरेपछी,,,